Wasiirka amniga oo isagoo ceyb ka carar ah amar dul-dhigay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka amniga oo isagoo ceyb ka carar ah amar dul-dhigay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho (DHAGEYSO)
Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii dhaawaca fudud kasoo gaaray weerarkii ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda ee Villa Soomaaliya ayaa baaq u diray milkiilayaasha hoteeladda magaalada Muqdisho.
Wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in milkiilayaasha hoteelada magaalada Muqdisho looga baahan yahay inay amniga hoteeladooda sugaan, islamarkaana ay sameystaan ciidamo ugaar ah iyaga, hadii kale ay iska xiraan hoteeladaas.
Waxa uu wasiirka sheegay dhibaatada amni darro ee ka dhacday Hoteelada Muqdisho kaliya inaanan dusha loo saari karin hay’adaha ammaanka ee dowladda, balse qeyb ka mid ah dhaliisha ay leeyihiin mas’uuliyiinta hoteelada.
“Hal mid ayaan rabaa inaan sheego, dadka shacabka ah ee Hoteelada isugu imaanaayo ee degan, hadii hoteelka amniga qofka uusan suggi karin inuu furnaado ma’ahan marka taas in la ogaado ayaan rabaa ma’ahan dhibkii dhaca in la dhaho hay’adaha amniga ayaa masuuliyadaasi iska leh in la dhaho lama rabo, shacabka goobaha maqaayadaha iyaga inay amnigooda suggaan ayaa la rabaa sida ay rabaan haku sugaan.” Sidaasi waxaa yiri wasiirka amniga C/risaaq Cumar Maxamed.
Dhinaca kale, wasiirka oo muuqda in howshii wasaaradiisa uu dusha u saarayo dad ganacsato ah islamarkaana shacab ah, ayaa waxayna tani ka mid tahay fashilka heysta wasiirka oo dad badan ay haatan ugu baaqayaan inuu iska casilo xilka uu wasaaradda ka haayo.
Si kastaba ha haatee, hadalka wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari xamuul ah uu ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, xilliga weerarka dhacaayay wasiirka amniga iyo mas’uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan ayaa ku sugnaa Hoteelka SYL oo qaraxa bur-buriyay.